I-Man United enkingeni yokungadlali kahle | Scrolla Izindaba
Isimo seqembu sichazwe “njenge siphansi ngokwedlulele”.
Njengoba isikhathi sokuphatha somqeqeshi wesikhashana u-Ralf Ragnick sifika esiphethweni, izikhathi zokuzilolonga kuthiwa zinzima kakhulu.
Izikhathi zokuzilolonga ezingezinhle ziholele ekutheni ama-Red Devils ahlulwe ngo 4-0 i-Brighton kanye ne-Hove Albion, futhi ngemuva kwalokho, uRagnick unikeze iqembu izinsuku ezine zokuphumula.
Yize iqembu lingenayo imidlalo yase-Europe futhi lingenawo umdlalo waphakathi nesonto, ikhefu belingaba into elungile ukube leli qembu belingekho esimweni senhlekelele.
Okwenza izinto zibe zimbi kakhulu, uRagnick uthathe ikhefu ukuze ayojabulela iholidi e-Barbados, uzithathela usuku olwengeziwe, okubikwa ukuthi kucasule abadlali abambalwa be-United.
Njengoba i-United iya emdlalweni wokugcina wesizini, kusengenzeka ukuthi izophuthelwa ngokuphelele indawo emiqhudelwaneni yase-Europe.
Njengamanje ama-Red Devils asendaweni yesithupha kwiligi ngamaphuzu angu-58, i-West Ham ingaphansi kwayo, ilandela ngemuva ngamaphuzu amathathu kanti isanomdlalo esandleni.
I-United izofuna ukuwina emdlalweni wayo wokugcina ne-Crystal Palace ukuze ithole indawo kwi-Europa League ngesizini ezayo, kodwa ukwakhiwa kwalowo mdlalo akubanga kuhle.
Ngemuva kokuthi iqembu lizilolonge ngoLwesine, ingxabano phakathi kwabadlali ababili abadala yenze ukuthi bahlukaniswe, ngokusho kwe-The Sun.
Lesi sigameko senzeke osukwini lokuqala ngemuva kokuthi iqembu lihlulwe libhekene ne-Brighton.
Ephendula ngengxabano eyenzeke ngesikhathi sokuzilolonga, uRagnick uphinde wanikeza iqembu isikhathi esengeziwe sokuphumula.
UTen Hag uzobe enomsebenzi omningi uma esezothatha izintambo kwi-Manchester ekuqaleni kwesizini ezayo.
Lo mqeqeshi odabuka e-Holland uzozibonela ngawakhe njengoba imibiko ithi uzobe esenkundleni ngempelasonto ezayo ukuze abone i-United idlala umdlalo wayo wokugcina wesizini.
Kuthiwa uTen Hag useyalele iqembu ukuthi libuye ukuzozilolonga ngaphambi kwesizini emasontweni amabili edlule njengoba kubikwa ukuthi akaneme ngesimo esingesihle seqembu.